मिस यूनिभर्स नेपालमा उत्कृष्ट २४ को छनौटको घोषणा - गोकर्णेश्वर खबर
गोकर्णेश्वर खबर१८ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:४३ मा प्रकाशित (१ महिना अघि) ७९ पाठक संख्या
काठमाडौं । मिस यूनिभर्स नेपालका लागि नयाँ फ्रान्चाइजी ब्रेभ, बोल्ड एण्ड ब्यूटिफूल प्रा.लि. ले ल्याएको यस वर्षको मिस यूनिभर्स नेपालको यही मंसिर १३ गते भएको एक समारोहमा मिस यूनिभर्स नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक नगमा श्रेष्ठले उत्कृष्ट २४ को छनौटको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
उक्त समारोहमा बोल्दै नगमा श्रेष्ठले भन्नु भयो, गएका २ हप्ता हामीले यस प्रतियोगितामा टाष्कहरुमा निकै स्तरीय सहभागिता भयोको पायौं । यसै गरी आफ्नो मनपर्ने प्रतियोगीलाई भोटिङ गर्ने क्रममा पनि हामीले प्रशंसकहरुको उल्लेखनीय साथ देख्यौं । हाम्रो उदेश्य भनेको यस प्रतियोगितालाई लोकतान्त्रिक बनाउनु हो र भोटिङबाट प्राप्त परिणामले सोही उदेश्यको परिपूर्ति भएको पुष्टि भएको छ ।
उहाँले थप भन्नु भयो, प्रतिभाको स्तरको कारण भोटिङको नतिजा निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको कारणले गर्दा गत साता भनिए झै आज उत्कृष्ट १४ नभई उत्कृष्ट २४ को घोषणा गर्दैछौं । उत्कृष्ट २४ ले अब अझ निरन्तररुपमा ब्रेभ, बोल्ड र ब्युटिफूल हुन आवश्यक छ किनकि तपाईंलाई भोट गर्नेहरुले तपाईंलाई हेरिरहेका छन् ।
यस मिस यूनिभर्स नेपालका विजेताले रु. १० लाख नगद उपहार प्राप्त गर्ने छन् जुन नेपाली सौन्दर्य प्रतियोगिताहरु मध्यकै सर्वाधिक धन राशि हो ।
सामूहिक विविधताको उदाहरणको रुपमा स्थापित यस प्रतियोगितामा लैङ्गिक विविधता मात्र नभई तौल, उचाई तथा अन्य शारीरिक बनोटमा विविधता भएका प्रतियोगीहरुको समेत सहभागिता रहनेछ ।
केही मानिसहरूका लागि विशेषाधिकारमा मात्र सीमित नभई यो प्रतियोगिताले धैरे व्यक्तिहरुका लागि उल्लेखनीय अवसर प्रदान गर्नेछ । नेपालमा आयोजित सबै सौन्दर्य प्रतियोगितामा विविधता ल्याउने उद्देश्य लिएको यस प्रतियोगिताको विजेताको छनौट निर्णायक र मतदानको आधारबाट गरिनेछ ।